ဥရောပရထားစျေးနှုန်းများပီသသူရဲ့ကွာခြားချက်ဗြိတိန်ရထားစီးနင်စျေးနှုန်းများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပရထားစျေးနှုန်းများပီသသူရဲ့ကွာခြားချက်ဗြိတိန်ရထားစီးနင်စျေးနှုန်းများ
ဗြိတိန်ရထားစီးစျေးနှုန်းများမြင့်မားတဲ့မှထမြောက်တော်မူကြပါပြီ. ဥရောပကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရထားခရီးရှိသည်ဖို့စဉ်းစားသည်. ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတ ဥရောပ၌မီးရထားခရီးမဆံ့ လှပသောရှုခင်း. မီးရထားခရီးသည်မှဝေးလံသောကျေးရွာများတွင်ထံမှနေရာတိုင်း access အဓိကမြို့ကြီးများ. ဥရောပမှာ, ရထားခရီးစျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်များမှာ, ခရီးသည်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံနှစ်ဦးစလုံးချွေတာ. ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်, သို့သော်, ရထားခရီး အလွန်စျေးကြီးတယ်.
The price of commuting in the UK has increased by an average of £700 in the last7နှစ်ပေါင်းအလုပ်သမားကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်နှင့်အညီ. အများဆုံးထိခိုက်ခဲ့ပြီးသောခရီးမှဘာမင်ဂမ်ကနေရထားဖြစ်ပါသည် လန်ဒန်. Commuters who use this train now have to pay Train ride prices of £10,567 foraseason ticket. အဆိုပါ စျေးနှုန်းတိုး ရဲ့ start မှာ 2018 အချို့ကိစ္စများတွင်အချို့သောပြီးသားစျေးကြီးရာသီလက်မှတ်တစ်ခုအပို£ 100 ကျော်ကဆက်ပြောသည်ထားပါတယ်.
ဂျာမနီသို့ခရီးသွားသူများသည် BahnCard100 ၀ ယ်နိုင်သည်, အရာအားလုံးဖုံးလွှမ်း ဂျာမနီ for £3,795.
တွင် ပြင်သစ်, နှစ်စဉ်သွားလာမှုမှ paris ရထား ride prices can be as low as £750 and in Italy passengers traveling between Velletri and Rome pay only £442.
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရထားစျေးနှုန်းများဒါမြင့်, ကနေလန်ဒန်ကို Waterloo သွားရန်နှစ်စဉ်လက်မှတ်ကြောင်း 20 miles outside London costs 3,248.
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းတိုးထူထောင်သောရထားသည့်ကုမ္ပဏီများ 2018 ခဲ့ကြ မြောက်ပိုင်း (4.7%), TransPennine Express ကို (4.6%), နိုင်ငံကျော်ဖြတ် (4.1%), Merseyrail (3.6%), နှင့် ကညာရထား (3.1%).
ကလေ့လာမှု VoucherCloud ဗြိတိန်ရထားပေါ်တွင်ခရီးသည်တစ်ဦးကြီးမားသောပေးဆပ်ကွောငျးဖျောပွသ 50 ခရီးထွက်မိုင်နှုန်း pence. မိုင်နှုန်းကုန်ကျစရိတ်သည်အဘယ်မှာရှိအီးယူ၏ကျန်ဤနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ 19 pence.
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့, Cologne ရထားမှ
Walk သို့မဟုတ် Cycle
ရထားစျေးနှုန်းများကွဲပြားခြားနားသောလိုင်းများသည်နှင့်အညီသွားပါသောကြောင့်. It could be that there isaline that isabetter price for you but doesn’t run through your local ဘူတာရုံ. ဒီကိစ္စမှာ, သငျသညျလမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်သံသရာနိုင်ပါတယ် 10-15 ပိုကောင်းသောစျေးနှုန်းမှာဘူတာရုံရရန်မိနစ်, တူကသင့်ပြန်လာခရီးတစ်ဘူတာရှာဖွေမှန်.
ကြောင့်တရားမျှတသောရထားစီးစျေးနှုန်းများလက်ရှိလမ်းကို တွက်ချက် ဗြိတိန်ရထားပေါ်တွင်, ဒါဟာအမှန်တကယ်သင့်ရဲ့ရနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုလက်မှတ်တွေကိုဝယ်ခြင်းငှါစျေးသက်သာစေနိုင်ပါတယ် ခရီးလမ်းဆုံး တဦးတည်းကိုတိုက်ရိုက်လက်မှတ်ဝယ်ယူခြင်းထက်. သငျသညျဥပမာလီဗာပူးလ်အသင်းအနေဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှခရီးသွားနေတယ်ဆိုရင်, လီဗာပူးလ်မှခရူသို့သွားပြီးနောက်ခရူသည်လန်ဒန်သို့သွားရန်အတွက်စျေးသက်သာသည်, တိုက်ရိုက်လီဗာပူးလ်-လန်ဒန်လက်မှတ်ဝယ်ယူခြင်းထက်. သင့်ရဲ့ခရီးထွက်စစ်ဆေးခွဲဝေအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက အုပ်စုခွဲဂဏန်းတွက်စက်.
သင်တစ်ဦးလက်မှတ်အရောင်းဆိုင်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရန်တဲ့အခါမှာသင်တို့အဘို့အထိုက်ခွင့်ရှိနိုင်ပါသည် အကျိုးခံစားခွင့် ကဲ့သို့ 25% သင်၏နောက်ခရီးတစ်ခုသို့မဟုတ်အခမဲ့ပူသောက်ချွတ်.
သငျသညျဥရောပ၌ရထားခရီးစီစဉ်နေပါတယ်? အဘယ်ကြောင့်မယူ3မိနစ်အပေါ်စျေးနှုန်းချိုသာရထားလက်မှတ်တွေတှေ့ SaveATrain . သငျသညျခရီးမှချင်ပါတယ်သောနေ့စွဲနှင့်အချိန်အတွက်ဖြည့်ပါ, နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ခရီးများအတွက်အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့်သင်တို့ကိုပေးသွားမှာပါ, သငျသညျမျိုးစုံနည်းလမ်းတွေထဲမှာအဘို့အပေးဆောင်နိုင်သော.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fuk-train-ride-prices-vs-europe%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, သင် / TR မှ / က de သို့မဟုတ် / ru ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများနိုင်ပါတယ်.
#စီးနင်း #uk ဗြိတိန် europeantravel Tranride ရထားခရီးသွား